Miantso dokotera vazaha sy miantso miaramila vazaha | Hery - Tsiky dia ampy |
Hery - Tsiky dia ampy
Resaka mifangaro, zah manokana, serasera, blaogy, sns...
Miantso dokotera vazaha sy miantso miaramila vazaha
2009-03-06 @ 09:38 in Politika
Resaka isan'ny nanaitra ahy tatsy amin'ny serasera indray. Averiko eto ihany fa tsy hevitro ity fa hevitr'i Andrianarivo Robson. Tsy maninona raha mamaly eto ambany eto ianareo kanefa mety tsy ho hitany akory izany. Raha mazoto moa dia jereo eto ny toerana tena hamaliana azy.
Atao resaka be ankehitriny fa misy « mercenaires » teo @ place 13 mai nibaiko ny miaramila Malagasy. Dia nataontsika sasany ho olana be izany. Dia izaho no mba hevitro.
Nodidiana I Mahalatsa sy Mahagaga tsy vita tao Dago fa nalefa taty Farantsa. Tsy nisy niteny isika fa samy faly satria vita soa aman-tsara ny fandidiana. Spécialiste ireo ary azo lazaina koa hoe “mercenaries” fa ao amin’ny sehatra Fahasalamana.
Vao afak’omaly ny tao @ MAEP no nanao fiaraha-midinika momba ny fambolena vary ary dia nanafatra expert tany ivelany nanome toro-marika. Azo lazaina ho “mercenaire” koa io fa ao @ sehatra fambolena.
Ny sehatra Fizahan-tany eto amintsika dia anjakan’ny teratany vahiny ny fitrandrahana azy. Tsy misy miteny isika kanefa “mercenaries” koa ireo fa ao amin’ny lafiny “tourisme”.
Maro tsy ho tambo isaina ny ohatra.
Ny fanontaniana dia ny hoe nahoana no asiana resaka be raha vao ny ao @ miaramila no manafatra “expert en mouvement de masse”? Dia gaga amintsika aho. Amiko sehatra tahaka ny sehatra rehetra io, rehefa ilaintsika ny fanampiana avy any ivelany na inona na inona ka mahasoa antsika tsy hitako ny olana. Famerenana ny filaminana ao anatin’ny fotoana fohy no tanjona, izay fomba rehetra hahatratrarany izay no jerentsika.
Sa ahoana hoy ianareo?
Nampidirin'i hery | Trackback (0) | Permalink
Ho hitanao ato ny isandroko. Angoniko ato mba hovakiako indray any aoriana any :-)
Ity ady ity
Moderna en poche, daozy fahatelo
Hetsika hanampiana ny any atsimo
Ireo tsy mankalaza asaramanitra
Tsy hatao vakisiny mihitsy
Tsy aritra  (rss)
Eritreritra mandalo  (rss)
Izaho sy ny ahy  (rss)
Serasera 3 minitra  (rss)
Finoana sy Fivavahana  (rss)
Tononkira Android  (rss)
Blaogy Dev  (rss)
Manala azy  (rss)